Mgbasa ozi ezumike nke Ụlọ Nche Apple Watch 2
Apple eweputara mgbasa ozi abụọ ọhụụ maka Apple Watch Series 2, na-atụkwasị obi na ọ ga-enyere ubiquity aka ma mee ọtụtụ ihe ọzọ.
Egwuregwu Apple Watch 2
Goliath Cupertino nwere ike ime ka ọtụtụ uru ya site na nnukwu iphone ha na-eme n'afọ a na nbata nke ha mmiri na-adịghị ọhụrụ iPhone 7 na 7 Plus na kamera abụọ, ma ọ bụ site na akaụntụ niile na-aga na ihe niile iji mee ka smartwatch ha nchịkwa na-achịkwa ma na-achịkwa na-edozi na amaghị ya dị ka nzukọ ahụ na-ekwu.
Ka oge na-aga, onyinye smartwatches - ọ bụghị naanị Apple - agafeela karịa 50 percent. Atụmatụ ohuru ọhụrụ nke Apple na-ahapụ na Friday na-emetuta Apple Watch Series 2 dị ka "usoro ihe omuma nke ndụ."
Ihe ndekọ 10-na 16-nke abụọ gụnyere ebe dị iche iche dịka Los Angeles na Asia, ụlọ ọrụ na-agagharị agagharị, na nlekọta bọl na-apụ. Nkwalite ahụ na-etinye uche na nchịkọta pụrụ iche nke ihe ahụ, ya na onye na-ekpuchi ya na-emeghe ya dị ka ngọzi - na-atụ aro na ọ ga-eme ka a ghara inwe oge emeri maka oge Krismas!
Mashable kwenyesiri ike na Apple Watch nọ na-akwọ ụgbọala na smartwatch ngosi, Otú ọ dị nzukọ ahụ ajụla ịchọta ọnụọgụ ọnụahịa nke ngwa ngwa ha, na-eme ka ọtụtụ ejighị ihe n'aka ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, Apple CEO Tim Cook ejiri ụjọ jide n'aka na Tuesday site n'aka email nye Reuters na "ozi ya na-egosi na Apple Watch na-eme ihe pụrụ iche ma yie ka ọ ga-abụ ihe dị iche iche n'etiti oge kachasị mma n'oge a."
"Na-emekọ mmepe na-apụ na eserese. A ga-agwa eziokwu, n'etiti izu ụka nke izu ahia Krismas, onyinye anyị na-enye site na Apple Watch bụ ihe a ma ama karịa izu ọ bụla n'akụkọ ihe mere. Kedu ihe ọzọ, dị ka anyị tụrụ anya na, anyị na-egwu egwu maka nkeji iri na ise kachasị maka Apple Watch, "Cook dere.
Facebook CEO Mark Zuckerberg ewuru "Jarvis" Butler Software maka ụlọ ya